भारतका सबै सेनाका प्रमुख बिपिन रावतले फेरी नेपालीलाई ठेस पुग्नेगरी यस्तो बयान जारी गरे – Khabaarpati
भारतका सबै सेनाका प्रमुख बिपिन रावतले फेरी नेपालीलाई ठेस पुग्नेगरी यस्तो बयान जारी गरे
December 18, 2020 December 18, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on भारतका सबै सेनाका प्रमुख बिपिन रावतले फेरी नेपालीलाई ठेस पुग्नेगरी यस्तो बयान जारी गरे
काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाल र भारतबीच सीमा विवादलाई लिएर सम्बन्ध खराब बनेको छ । भारतले नेपाललाई पटक–पटक चेतावनी पनि दिदैँ आएको छ । यो बीचमा भारतले एक देशको नाम लिदैँ नेपाल–चीन सम्बन्धका बारेमा नयाँ बयान जारी गरेको छ ।
भारतीय सेनाका पूर्व प्रमुख एवं चीफ अफ डिफेन्स स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावतले नेपाललाई चेतावनी दिएका हुन् । राउतवले श्रीलंकाको उदाहारण दिएर नेपाललाई सन्देश दिन खोजेको देखिएको छ । नेपालले श्रीलंका र अरु देशबाट सिक्नुपर्ने सीडीएस जनरल रावतले एक कार्यक्रममा बयान दिएका हुन् । उनले नेपाल–चीन बीचको सम्बन्धलाई लिएर यस्तो बताएका हुन् ।
India’s goodwill comes with no strings attached. Nepal is free to act independently in international affairs but must be vigilant & learn from Sri Lanka & other nations which have also signed agreements with other countries in the region: CDS General Bipin Rawat, at an event pic.twitter.com/T2Hc2vps42
उनले चीनको ऋण नीतिका बारेमा उक्त बयान दिएका हुन् । उनले भनेका छन, ‘भारतको सद्भावना कुनै तार जोडिएर साथ आउँदैन । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा स्वतन्त्र रुपमा कार्य गर्न स्वतन्त्र छ तर सतर्क रहनु पर्छ । नेपालले श्रीलंका र अन्य राष्ट्रहरुबाट पनि पाठ सिक्नु पर्छ, जसले यस क्षेत्रका अन्य देशहरुसंग पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन ।’
जनरल रावतले वान बेल्ट वान रोड (बीआरआई) परियोजनामा नेपालले चीनसँग लिने ऋणतर्फ संकेत गरेका हुन् । चीनले श्रीलंकामा बन्दरगाह बनाउनका लागि दिएको ऋण तिर्न नसकेपछि ९९ वर्षका लागि चीनलाई भाडामा दिनु परेको छ ।
सुनको भाउ लगातार बढ्दै, यस्तो छ आजको मुल्य
मतदान गर्न जानै लागेको बेला अचानक बिरामी भएँ, अस्पताल लैजाने क्रममा बे हो स भएछु : सांसद शाही
हार्दिक बधाई ! १० नेपालीद्वारा विश्वको दोश्रो अग्लो के टू हिमालको सफल आरोहण, विश्व रेकर्ड कायम
घट्यो सुनको मूल्य, यस्तो छ आजको भाउ July 27, 2021
रेसिङ ट्रयाकमा चिम्लियो बाइक, मशहूर राइडर ह्युगोको भयो निधन July 27, 2021